စကြာဝဠာအနန္ဒ၌ရှိကြကုန်သော လူ၊နတ်၊ဗြမ္မာ၊သတ္တဝါအားလုံးတိုသည် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ၊ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒ ပြည်ဝကြပါစေ...
တချိန်က ဒိုအလံ မြန်မာ×အင်္ဂလိပ်.အင်္ဂလိပ်×မြန်မာ.အဘိဓါန် Downloadငွေလဲးနုန်းထားများအမြဲ update ဖြစ်နေမှာပါ Rangoon Time မလေးရှားစံတော်ချိန်
ဖတ၊်မှတ်စရာ ထွေတလာ(1 week)
စက္ကူပေါ်က အနုပညာ ဖန်တီးမှုများ
Laptopတစ်လုံး နှင့် အနာဂတ် မျိုးဆက်အန္တရာယ် ( ယေကျာ...
နာရီ အပျက်တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကားလေးတွေ ပါ...
နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်တိုင် နစ်မြုပ်နေသော ဓမ္မစေတီ ခေ...
လူတိုင်းအတွက် လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေမယ့် ဘက်စုံသုံး မီဒီ...
ကျွန်ုပ်နှင့် ရုရှား ၄ နှစ်တာ
ABCD အက္ခရာ လေးတွေကနေ သင့်ရဲ့ စရိုက်ကိုခန်.မှန်းနို...
ကျွန်တော်တို့ တနင်္သာရီတိုင်း အကြောင်း
အာကာသတွင်းသို့ ဓာတ်လှေကားဖြင့် သွားနိုင်ရန် ဂျပန်က...
အင်းလေကန်နဲ့ တောင်ကြီး သွားလည်မယ်
‘‘ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာ ဘယ်သူလာလို့ ထောက်ပံ့ပါလိမ့် ’’
မာစီဒီးကား ငွေ ၁ ကျပ်ဖြင့်ရောင်းမည်
ဗိတိန်နိုင်ငံမှ လူသားစား ကွင်းဆက် လူသတ် ကောင်ကို ရ...
သန်မာလှသောပင့်ကူကြီး မြွေများကိုပင် နံနက်စာအဖြစ်စာ...
နော်ဝေမှ Atlantic Ocean လမ်း (Atlantic Ocean Road)...
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လှောင်အိမ်တွင်း နေထိုင်ခဲ့ရသည့် တ...
အံမခန်း လှူဒါန်းသွားခဲ့သော မလေးရှားရောက်မြန်မာများ...
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပဋိသန္ဓေနေစဉ် ရှေ့ပြေးနိမိတ်ကြီး(၃...
ရန်ကုန်က ရေခဲကမ္ဘာ ( Ice Wonder Land ) သို့ အလည်တစ်...
ဒေါ်စု မွန်ပြည်နယ်ခရီးစဉ် ကျိုက်ထိုမော်လမြိုင်အထိမြ...
ဒီထက်ဆုံလင်တဲ့တူရိယာလေးတွေတီးရအောင် အထက်စာမျက်နာများမှ တီးဝိုင်း ရှိရာသို့ ကြွပါ
အားလုံးနှင့် ပြိုင်မလား ကိုယ်ကျင့်တရား (သီလ)ကျွန်တော်တိုကမ္ဘာမြေကြီးမှာလူသင်းကွဲးသောဘေး၊စစ်ဘေး၊ ရေဘေး၊လေဘေး၊ မီးဘေး ၊ မုန်တိုင်း၊ ငလျှင်၊ စသဖြင် အမျိုးမျိုးသော ဘေးဒဏ်အန္တရာယ်တွေ ကြောင့် အမျိုးမျုိုး အဖုံဖုံ ဒုက္ခတွေ ရောက်ကြရတာ ယနေ့ကမ္ဘာ့သတင်းတွေ မြင်တွေ့ ကြားသိ့နေကြ အားလုံးအသိပါ။ ကျွန်တော်တို မြန်မာပြည်မှာလဲ ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ အရင်ကထက် ဆိုးရွားသော၊ ဘေးအမျိုး ကြုံတွေနေကြရတာ အားလုံးအသိပါ။ဘယ်လိုဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေ ကြုံကြုံ ထိတ်လန့်လဲခဏ နေချင်သလိုနေလုပ်ချင်သလိုလုပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နှင့် နေနိုင်ကြတာ ဘာကြောင် ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အဖြေရှာသူ နည်းလှပါတယ်။ အန္တရာယ်မကင်း ဘေးမရှင်းခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းဟာသီလ မလုံကြလိုဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဆုံမခဲ့ပါသည်။ ဘာကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်တွေ များများလာရသလဲးမေးရင်အဖြေကရှင်းနေပါသည်။ သီလ မလုံကြလိုပါ။ လူမှန်လျှင် အနည်းဆုံး ၅ ပါး သီလလုံရမည် လို ဆရာတော်တွေအမြဲးဆုံးမကြတာ ကြားဖူးမှာပါ။ ယနေလူတွေကို လိုက်မေးကြည်လျှင်(၁) သူတစ်ပါးအသက်သတ်တာ ရှောင်နိုင်လား(၂) သူဥစ္စာ ခိုတာ ရှောင်နိုင်လား(၃) သူတစ်ပါး သားမယား မပြစ်မှားပဲ နေနိုင်ကြလား(၄) လိမ်ညာ မပြောပဲ နေနိုင်ကြလား(၅) မူးယစ် သေစာ မသောက်စားပဲး နေနိုင်ကြပါလား... ဟုမေမည်ဆိုလျှင် အဖြေမျိုးစုံ၊ ဆင်ခြေဆင်လက် မျိုးစုံ ထွက်လာပါလိမ်မည်။အဲလိုမျိုး လက်မမထောင်နိုင်သော အဖြေထွက်နေသ၍ ၊ရှေးရှေးကကောင်းမှူအထူးများ မရှိခဲဘူးသ၍ အမျုိုးမျိုးသောဘေးရန် အပေါင်းမှလွတ်ငြိမ်းမည်ဟု စိတ်မအေးရပါ။အမျုိုးမျိုးသောဘေးရန် အပေါင်းမှ ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံး တံတိုင်ကတော သီလပါပဲ။ကိုယ့်မှာ လက်မထောင်နိုင်လောက်သော သီလမျိုးရှိနေပါလျှင် ဘာဘေးမှ တွေးပူနေစရာမလိုပါ။ဘာရန်မှ တွေးကြောက်နေစရာ မလိုပါ။ ဒါကြောင့်အားလုံး ဘေးရန်ခတ်သိမ်း ငြိမ်းကြစေဖို သီလစောင့်ထိန်းကြပါစို့လို တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။ကဲ ...အားလုံးနှင့် ပြိုင်မလား ကိုယ်ကျင့်တရား (သီလ)ဒီလိုသာပြိုင်နိုင်ကြမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တိုကမ္ဘာမြေကြီးကျွန်တော်တို မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာ လှပစိုပြေအမြဲး အေးချမ်းနေမှာပါဗျာ ......။
စိတ်ကူးပျော်ရာသို ရောက်ရှိလာသူအားလုံးကို ကျွနုပ်မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါ. စိတ်ကူးပျော်ရာ သို့ဝင်ရောက်အားပေး ဖတ်ရှုလာသော သူငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါကြာင်း. Picture Window template. Template images by konradlew. Powered by Blogger.